အပိုင်း ၁။ အင်တာနက် အသိုက်အဝန်းပေါ်ဝယ် – Page2– Internet Bawdar
အပိုင်း ၁။ အင်တာနက် အသိုက်အဝန်းပေါ်ဝယ်
မောင်မယ်တို့ရေ အင်တာနက်ဆိုတဲ့ စာဥတို့လောကကြီးမှာလေ လူတွေကပေါင်းစုံရှိတာ။ အင်တာနက်က လူတွေကို မတည်ဆောက်ဘူး။ လူတွေကသာ အင်တာနက်ကို တည်ဆောက်ထားကြတာပါ။ ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ သုံး၊ ကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေပေးနိုင်သလို၊ ဒုစရိုက် လုပ်တဲ့သူတွေကျတော့ အင်တာနက်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အမြတ်ထုတ်နေကြတာတွေ သူများကို ဒုက္ခပေးနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
မောင်မယ်တို့ စာဥတို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က အရာတွေကို ဖန် တီးသလို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက်နေထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Digital Citizenship လို့ခေါ်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်လောကကြီးရဲ့ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာကို သတိပြုစေလိုပါတယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတိုင်းဟာ အင်တာနက်ပေါ်က ကိုယ်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယနယ်ပယ်ကို ဘယ်သူမှမပိုင်ပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားကြထားကို ဘယ်သူမှလဲ လာယူလို့မရပါဘူး။​ ဒီဂျစ်တယ် နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံသားတွေ ရှိသင့်တဲ့ တာဝန်တွေ၊ နီတိတွေနဲ့ အနည်းအများတော့ ပတ်သက်လာပါပြီ။ အဲ့ဒါမှပဲ သဟဇာတရှိတဲ့ ဒီဂျစ်တယ် အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို အတူတကွ တည်ထောင်နိုင်လေမပေါ့။ အဲ့ဒီအခါမှာ ဒီဂျစ်တယ် နိုင်ငံသားတိုင်းသိသင့်တဲ့ အချက်လေးချက်ရှိတယ်။​
၁- Digital Footprint ဆိုတဲ့ ကိုယ်အင်တာနက်မှာ ဘာလုပ်လုပ် ဘာသုံးသုံး ကိုယ်လုပ်သမျှ အရာတိုင်းဟာ ခြေရာကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်တဲ့အချက် ၂- Digital Identity ဆိုတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်နေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အရာ ၃- Digital Rights ဆိုတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ လူတိုင်းရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အကြောင်းနဲ့ ၄- Digital Civics ဆိုတဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ် အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်နိတိ ပေါ့ကွာ။
ဟိတ်… အဲ့ဒီထဲမှာမှ စာဥ​ က နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်နိတိ အကြောင်းကိုပြောပြရင်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ စိတ်အေးချမ်းသာယာစွာမှုကို ရရှိနိုင်မယ့် နေထိုင်ပုံအကြောင်းတွေကို ပြောပြမယ်လေ။
အင်တာနက်ဘော်ဒါမှာ Covid-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်မှာသတင်းအမှန်နဲ့ သတင်းမြန်တာတွေကို ဖတ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုလာမေးကြတာတွေရှိပါတယ်။ Covid-19 နဲ့ပတ်သတ်လို့ အရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု တွေမဖြစ်ရအောင်နဲ့သတင်းမှားတွေနဲ့မကြုံရအောင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Page လေးတွေကိုသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ World Health Organization Myanmar (WHO) (https://web.facebook.com/WorldHealthOrganizationMyanmar/?_rdc=10&_rdr) ဒီPageမှာဆိုရင်
COVID ကာလမှာ စိုးရိမ်မှုတွေကဘာဖြစ်မလဲ?
Covid ကာလမှာ သတင်းမှားတွေနဲ့ ကောလာဟလတစ်ချို့ ထွက်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်နေဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေး ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီကာလမှာ ဘာတွေက ကောလာဟလတွေဖြစ်မလဲ။ ဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြတာလဲ။ ဆိုတာကို ပြောဆိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ Covidနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ တစ်ချို့ကောလာဟလတွေကတော့ ၁။
အင်တာနက်မှာဆိုရင် အများကြီးအထောက်ကူပြုတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာမှ ငွေလွှဲ တာလဲတစ်ခုအပါဝင်ပါပဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတစ်ဆင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစဥ် လုပ်ဆောင်မူတွေကို Mobile Bankingလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Mobile Banking မှာအဓိကလုပ်လို့ရတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဘဏ်ကိုသွားစရာမလိုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ တစ်ဖက်ကိုပိုက်ဆံလွှဲလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကတော့ -
မထွေးနဲ့ ဦးကိုဆို တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က Covid ကာလကြီးမှာ အလုပ်တွေကလည်းအဆင်မပြေ၊ သားသမီးတွေကလည်း သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ဆိုတော့၊ သူတို့မှာ အင်မတန်ကိုရုန်းကန်ကြရပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ ဦးကိုကစိတ်ပြေလက်ပျောက် အင်တာနက်သုံးရင်းနဲ့ Facebook ပေါ်မှာ ၁ သိန်းသွင်း ရင်
Privacy ဆိုတာဘာလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်တဲ့အရာတွေကို သတိမပြုမိပဲနဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတင်ဖြစ်တာတွေ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကို အ‌လေးမထားမိခြင်းကြောင့် မသမာသူတွေနဲ့ သူစိမ်းတွေက အလွယ်တကူရယူနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ privacy ဆိုတာ ကိုယ့်ရေးကိုယ်တာကိစ္စဖြစ်ပြီး အရာရာဟာ သူများနဲ့မမျှ‌ဝေသင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်တိုင် Cyberbullying လုပ်မိနေပြီလား?
Cyberbullying ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီတစ်ခါ မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှ‌ဝေပေးချင်ပါတယ်။ အခုလို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ မိတ်‌ဆွေတို့ကိုယ်တိုင် cyber bullying လုပ်နေမှန်းမသိတာမျိုးနဲ့သတိမပြုမိတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း သိပြီးသားသူတွေအတွက်ရော reminder အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ မသိသေးသူတွေအတွက်ပါ ဒီစာလေးကိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ cyberbullying ဆိုတာ မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်
Cyber Grooming နှင့် Sexual Harassment တို့ကိုသတိပြုရန်။
Cyber Grooming နှင့် Sexual Harassment ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို မျှ‌ဝေသွားချင်ပါတယ်။ Cyber Grooming ဆိုတာ များသောအားဖြင့် အသက်ပြည့်ပြီးသူလူကြီးက ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ကတဆင့် ဆက်သွယ် မိတ်ဆွေဖွဲ့ကာ ရင်းနှီးမှုရယူပြီး၊ ကလေးနဲ့ခင်မင်အောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Zoom လိုပဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Google Meet နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Google Meet သုံးဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး Gmail ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Google Meetဟာဆိုရင်လည်း သင်တန်းတွေပို့ချလို့ရသလို ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လည်း ပြောနိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Meet.google.com
အခုလို Covid ကာလအတွင်းမှာလည်း ကဏ္ဍအသီးသီးမှာလည်ပတ်လျက်ရှိတဲ့ ယန္တရားတွေ ရပ်တန့်မသွားဖို့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအစရှိတဲ့ အရေးကြီးတာတွေလုပ်နိုင်ဖို့ နည်းပညာအကူအညီအဖြစ် Zoom ကို အသုံးပြုကာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့၊ အသုံးပြုသင့်တဲ့ နည်းပညာ tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zoom အကြောင်းကိုလည်း
Skype ရဲ့ အရေးပါပုံ နဲ့ Skype ကိုဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီတစ်ခါ ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ Skype က၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုနီးပါးကိုအောင်မြင်မှုတွေဆက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်​ရေး Application ဆရာကြီးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ Skype